अमिताभ लाई कादर खानले मृ’त्युको अन्तिम स्वाससम्म प, र्खिरहे , आखिर किन ? थाहा पा, उनुहोस् - Onlines Time
अमिताभ लाई कादर खानले मृ’त्युको अन्तिम स्वाससम्म प, र्खिरहे , आखिर किन ? थाहा पा, उनुहोस्
भारतीय चल’चित्रका प्रसिद्ध अभि’नेता कादर खानको जन्म २२ अक्टुबर १९३७ मा भएको थियो । कादर खान एक राम्रो हास्य कलाकार र खलनायक थिए, साथै एक संवाद लेख’कका रूपमा उनले धेरै सुपर’हिट फिल्महरू दिएका छन् ।
अफगा’निस्तानमा जन्मिएर भारती’य सिने क्षेत्रमा चर्चित खान भारतीय साहित्यमा अब्बल लेखक र हास्यविधामा जमेका कला’कार थिए। उनले महानायक अमिता’भ बच्चनका लागि धेरै फिल्मह:रूमा संवाद लेखे।
एक प्रकार अमिताभ:लाई यो शि’खर सम्म पुग्न कादर खानले पनि सहयोग पुर्‍याइरहेका छन् । तर अमिताभलाई ‘अमित जी’ नभनेको कारण कादर खानला’ई फिल्मबाट हटाइए:को थियो।
एक भिडि’योमा कादर खानले कसरी फिल्म पाउन छाडे र कसरी अमिताभ बच्चन’लाई ‘अमित जी’ नभनेकोमा फिल्मबाट ह’टाइए भनेर बताएका छन्।उक्त भिडि’योमा कादर खान भन्छन्, ‘म अमिताभ बच्चनलाई अमित भनेर बोलाउँथे।
एक निर्माता मकहाँ आए र भने तपाईले सिरजी’लाई भेट्नुभयो? मैले भने को सर? उनले भने तपाई’लाई थाहा छैन ? उनले अमिताभलाई औंल्याए र भने उहाँ हाम्रो सर हुनुहु’न्छ। मैले भने कि उनी अमि’ताभ हुन्।
सबैले त्यस’बेलादेखि अमि’ताभलाई सर, सर जी, भनेर बोलाउन शुरू गरे तर अमितजी वा सर जी मेरो मुख’बाट कहिल्यै बाहिर आएनन्। बोल्न नसक्ने भएको:ले मैले उनको समूह छो’डिदिएँ।
कादर खान अघि भन्छन्, ‘के कसैले आफ्नो सा:थी वा भाईलाई अरु कुनै नामले बोलाउन सक्छ? यो असम्भ’व छ म यो गर्न सक्दिन र त्यसैले म त्यहाँबा’ट निस्किए। यसैले म उन’को फिल्म ‘खुदा गवाह’ मा थिइन्।
त्यसपछि मैले उनको फिल्म ‘गंगा जमुना ..’ लेखे र आधा’मा छोडे। यसपछि केही अन्य फिल्म’हरू पनि थिए, जुन मैले काम गर्न शुरू गरेको थिए तर ती पनि छोड दिए। ‘
कादर खानको सन् २०१९ कै पहिलो दिन जनवरी १ मा ८१ वर्षको उमेरमा निध’न भयो। क्यानाडाको एक अस्पता’लमा उप’चार भइरहेका बेला खानको निध’न भएको थियो।
यसै बिच कादर खानका छोरा सरफ’राजले कादर खान क्यानडा गएपछि उनलाई बलिउड उद्योगबाट बाईपास गरेको आरोप लगाए । सरफराजले भनेका थिए ‘कादर खान आफ्नो अन्तिम स्वास’सम्म बलिउ’डका महा’नायक अमिताभ बच्चनला’ई सम्झि रहेका थिए ।’
उनले भने, ‘चलचित्र जगतमा यस्ता धेरै मानि’सहरु छन् जुन मेरे बुबाको निकै नजिक थिए । तर एक व्यक्ति, जसला’ई मेरो बुबाले निकै मन पारा’उनु हुन्थ्यो, वहाँ हो बच्चन साहब (अमिताभ बच्चन)।
म बुबवासँग सोध्थे कि वहाँ फिल्म जग’तमा सबैभन्दा ज्यादा कसलाई सम्झनु’हुन्छ भनेर तब वहाँ सिधै उत्तर दिनुहु्न्थो बच्चन साहब। साथै मलाई थाहँ छ कि त्यो माया आप’सी थियो।’
भावुक हुदै सरफ’राजले भने, ‘म चाहान्थे कि बच्चन साहबलाई थाहा होस कि मेरो बुबा अन्तिम स्वास’सम्म वहाँसँग कुरा गर्न भनि रहन्थे ।’ आफ्नो सुपरस्टर्ड’मको समय जसरी राजेश खन्ना’ले सलीम जावेदलाई ‘हाथी मेरा साथी’मा ब्रेक दिएका थिए,
त्यस्तै राजेश खन्नाले कादर खान’लाई पहिलो पटक फिल्म ‘रोटी’ मा संवा:द लेखक रुपमा अवसर दिएका थिए। त्यसप:छि कादर खानले राजेश खन्नाका सबै चलचित्रह:रूका लागि संवाद लेखे।
कादर खानले जीतेन्द्रको र श्रीदेवी’को फिल्म तोहफापछि उनका सबै फिल्म’हरूको स’म्वाद लेखेका थिए। शक्ति कपूर, डेविड धवन र गोविन्दा ती व्यक्ति हुन् , जसले १९८० र १९९० को दश’कको क्रममा कादर खानसँग नजिक रहेर काम गरेका थिए ।
Prevइटहरीमा प्रेमीकाले धोका दिएपछि प्रेमीले वि ष खाए,अहिले यस्तो अवस्था भयो (भिडियो हेर्नुस्)